[IMIBONO] Makungadlalwa ngabasakazi boKhozi
Fezile Mahlobo | November 13, 2018
MHLELI: Kwelakho eliwela umfula ugcwele ngicela unginike isiqeshana ephepheni lethu esilithandayo ngiveze nakhu engikhala ngakho.
Ngike ngafunda umbhalo kaThobani Mmema walapha eNtumbane, eKotineke, oPhongolo. Cha ngisizwile isikhalo sakhe sokungenami ngendlela osekusakazwa ngayo uhlelo uSigiya Ngengoma kuKhozi FM.
Uthi kunabaculi abangadlalwa ohlelweni iSigiya Ngengoma. Ubalule ababili okunguGatsheni nomunye esengimlibele. Uthe kudlalwa kakhulu abaseMzimkhulu ikakhulukazi laba abangaphansi kwesitebele sikaMfishimfishi. Uphinde waveza ukuthi kudlalwa kakhulu uSgwebo nabaseNkandla laba abathandwa nguye abadlalwa ikakhulukazi uGatsheni.
Izingoma ezisuke zidlalwa ngaleso sikhathi akangene kuzo umsakazi, yena wenza into okuthiwa akayenze. Kunomuntu osemva kwakhe ophethe izintambo oletha uhla lwezingoma ezizodlalwa hhayi le nto eshiwo nguThobani Mmema. Mina ngiyaphikisana nayo, yena akakucacise ukuthi ukhuphula umculi ophethwe nguye uGatsheni.
Makayeke ukudlala ngabaculi baseNtumbane uma kunalo mcimbi oba khona njalo ngoDisemba ababize bezodlala bese ebalutha ngokuthi abanike imali engangoR4 000 bese abadumile ebanike imali eningi, kuwukudlala ngabaculi bangakithi oPhongolo lokho.
Abaculi akabanike imali elinganayo angaqhubi inzondo ngokudla amandla ezinye izingane bese ethi imali ngeyakhe esuke yenze umcimbi obizwa ngeShodoza Msakandi.